I-Sea Mist Studio Apartment - I-Airbnb
I-Sea Mist Studio Apartment
Ikhaya elakhelwe ngaphansi komhlaba ibungazwe ngu-Kate
Ikhabethe lesitudiyo elibanzi elinendawo ethokomele kanye ne-air-conditioning yomjikelezo ongemuva. Isikhala simiselwe umuntu oyedwa noma umbhangqwana onegumbi losana kucansi oluphathwayo noma ilungiselelo elikhethekile lengane encane. I-WiFi yamahhala, ingadi yangasese ephakeme ukuze ujabulele kuphela ngesimemo sokuhamba engadini yale ndawo, indawo yokuhlala yangasese, nendawo yokupaka izimoto. Ikhishi lesimanje eligcwele elinebha yasekuseni, izihlalo ezimbili phambi komlilo wezinkuni, i-TV efakwe odongeni, indawo yokufunda, igumbi lokugezela elihlukile elibanzi.
I-Sea Mist Studio Apartment empeleni iyigumbi elikhulu, amamitha angu-7.5 x 5 amamitha anophahla oluphakeme lwamamitha angu-3, Isethi yezicabha zesiFulentshi ezivuleleka endaweni yangasese. Ilungiselelwe umuntu oyedwa noma umbhangqwana one-TV ebekwe odongeni, ikhishi eligcwele lesimanje elinezinketho ezihlukahlukene zezindawo zokupheka kanye nesitoreji esihle kakhulu, indawo yokudlela yasekuseni, indawo yokuphumula phambi komlilo ovuthayo kancane, a. Ideskithophu lokufunda elakhelwe ngaphakathi, kanye nombhede wendlovukazi wekhwalithi enhle eduze kwekhabethe elakhelwe ngaphakathi, igumbi lokugezela elihlukile elibanzi elihlanganisa indlu yangasese kanye neshawa enkulu engu-1.5 mx 1 m. Onke amalineni, amathawula nezingubo zokugeza ezinikeziwe, umbhede wendluliwe. Izungezwe ingadi ebanzi, ine-bbq etholakalayo uma uyicela kanye nefenisha yangaphandle kanye nokubukwa kwengadi okunokuthula.
1 umbhede wosana
ubusuku obungu-7 e- Warrnambool
4.86 · 149 okushiwo abanye
Indawo ecashile, i-Sea Mist ibekwe ekugcineni kwe-The Great Ocean Road. Uhambo olufushane nje ukusuka e-Logans Beach Whale Nursery kanye nomfula omuhle waseHopkins. I-Logans Beach Day Spa kanye nendawo yokuzivocavoca yabesifazane ihamba imizuzu emi-3 ikhuphuka ngomgwaqo usuka efulethini. Indawo yokudlela enomlando, emfuleni i-Hopkins cishe imizuzu engu-15 uhamba ngezinyawo uwela ibhuloho futhi ugudle umfula uhambe udlula ama-moorings wesikebhe. Baziwa kakhulu ngokudla okumnandi, indawo enhle ongaya kuyo ukuze uthole itiye noma ibhulakufesi langempelasonto. Kukhona futhi ithrekhi yokuhamba / yokugibela kanye ne-board walk promenade ezolandela indawo engaphambili futhi iphelele e-Break Water idlula i-Warrnambool Surf Club, i-Lake Pertobe nezinye izindawo zokudlela ezinhle, i-Simons ne-The Pavilion okumele uyiqaphele, okuyindawo enhle yokudla kwasekuseni. noma isidlo sasemini.
I-CBD iyimizuzu emi-5 kuphela ukusuka endaweni yokudlela, izindawo zemibukiso yezobuciko, izitolo zezipho, izindawo zokudlela kanye nezitolo ezikhethekile kanye nezitolo ezinkulu nezinye izitolo ezinkulu ezifana neTarget.
Ngihlala ngitholakala ukuze ngisize izihambeli ngemibuzo nolwazi. Ngiyajabula ukujabulela ingxoxo ngokuqabuleka uma ngisekhaya, ngithumelele umyalezo ukuze ngihlele isikhathi uma uzimisele ukuba nengxoxo. Nginguthisha, umdwebi, umlimi okhuthele futhi ngivame ukuba sengadini.
Ngeke sikuvakashele uma usubhukha ngaphandle kokuthi uqale ukusebenzisana. Ukujabulela ukuhlala kwakho, okuhlanganisa nobumfihlo bakho, kubalulekile kithi.
Sengikushilo lokho ngiyajabula ukungena ngithole ukufudumeza endlini ngezinsuku ezipholile uma uphume ntambama futhi ungathanda ukubuya endaweni efudumele, noma ufake i-airconditioning ngosuku olushisayo. Sizophinde sithumele imilayezo uma kunezinto ezithokozisayo ezenzeka endaweni yethu noma edolobheni isib. izilwane zasendle ezingadini noma umkhosi okhethekile noma imakethe esendaweni ethile eduze.
Ngihlala ngitholakala ukuze ngisize izihambeli ngemibuzo nolwazi. Ngiyajabula ukujabulela ingxoxo ngokuqabuleka uma ngisekhaya, ngithumelele umyalezo ukuze ngihlele isikhathi uma u…